निःशुल्क दन्तरोग परामर्श शिविर आयोजना
निर्माण सञ्चार,काठमाडौँ । आज शनिबार वीरेन्द्र पुस्तकाल कुटुबहालमा निःशुल्क दन्तरोग परामर्श सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
वीरेन्द्र पुस्तकालयको प्राविधिक सहयोग तथा नेशनल बाथरोग सेन्टर डेन्टल डिभिजनको सहभागितामा २६ गते बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म उक्त परामर्श शिविर सञ्चालन भएको थियाे ।
उक्त परामर्शमा ५० जना दन्तरोगीले परामर्श लिएका छन् । शिविरमा डा. रोशन भण्डारी र डा. शिखा भण्डारीले परामर्श दिएका थिए ।
उक्त परामर्शको अवसरमा आएका दन्तरोगीलाई उपचारमा २५ प्रतिशत छुट दिने डा. रोशन भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आज परामर्श लिने बिरामीहरुलाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । फागुन २७ गते देखि बिरामीको प्रकृति हेरेर फोन गरी उपचार समय निर्धारण गरिनेछ ।’
यस परामर्शमा विशेषतः किराले खाएको दाँतको प्रकृति, मुख भित्रको घाउको, दाँत सफा गर्ने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने, नयाँ दाँत हाल्ने तथा अन्य विभिन्न प्रकारका दाँतसम्बन्धी परामर्श दिइएको थियो ।
विगतदेखि नै नेशनल बाथरोग सेन्टरले मृगौला र बाथ रोगजस्ता विभिन्न रोगको पनि निःशुल्क परामर्श सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।